What is Linux ? — MYSTERY ZILLION
November 2008 edited February 2011 in Linux/Unix
စောင့်နေမယ်နော် ကြည့်ရအောင် လင်းနစ် သမားတွေ ဘာလို့ လင်းနစ် လင်းနစ် ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတာ
ဒီအောက်က article လေးက "Linux ကိုမသုံးဖို့ အကြောင်းပြချက် ၅ ချက်" ပါ။ ကျနော်တို့ဒီကနေ စရအောင်။ အဲဒါမှ Linux ကိုတကယ်စိတ်၀င်စားတဲ့သူတွေ ကျန်မှာပါ။
ဒီ article လေးက အပေါ်က article ရဲ့အောက်မှာ ဆက်လာတာပါ။ မတွေ့မိပဲ မျက်စိကျော်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ အခြေခံလေး ရိုးရိုးလေး တွေးလို့ရအောင်ပါ။ တွေးမှ မြင်လာမှာပါ။
Here we go again: why Linux is better
ကျနော်ပေးတဲ့ hyperlink လေးတွေမှာ စာတွေသိပ်အများကြီးရေးမထားပါဘူး။ လိုရင်းလေးလောက်လေး ရေးထားတာပါ။ တချို့ကစာဖတ်ပျင်းတယ်၊ ကျနော်လဲ စာဖတ်ပျင်းပါတယ်။ တချို့ကစာမဖတ်ချင်ဘူး၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးပဲ ဖျက်ကပ်ညှပ်ယူချင်တယ်။ အဲလိုနည်းထက် စာနည်းနည်းလေးတိုးဖတ်စေချင်တယ်၊ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းရပ်လေးတွေကို အဲဒါမှာ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပိုင်း တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ ကျနော်ကလဲ ဆရာတစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။ ဆရာလုပ်ရတာလဲ ၀ါသနာမပါပါဘူး။ ကျနော် ဆရာလုပ်နေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာလဲ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ မသိတဲ့သူများကို သိသွားရအောင်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒလေးကြောင့်ပါ။ ဘယ်သူမဆို ဒီ thread လေးအောက်မှာ Linux နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေ ပြောပေးကြပါ။ ရေးပေးကြပါ။ ပါ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါ။
Windows တွေနာမည်ရ အောင်မြင်မှု မရှိခင်တုန်းကတော့ Unix တွေက OS လောကမှာ စိုးမိုးနေခဲ့ပါတယ်။ Microsoft က Unix ကို စျေးကွက် လက်ဝါးကြီး အုပ်မှုနဲ့ တရားစွဲခဲ့ရမှာပေါ့ Unix က ရှုံးနိမ့်ပြီး Unix က Free OS လိုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Unix က Free OS လိုလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတွေ ဆေးရုံတွေက Unix ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ MS-DOS က ဝယ်သုံးရပြီး Unix ကိုတော့ free သာသာ အသုံးပြုခဲ့ကြရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Unix ဟာ ပြန်လည် တရားရင်ဆိုင်ပြီး အောင်ပွဲရကာ သူ့ OS အသုံးပြုထားတဲ့ User တွေကနေ ငွေကြေး တောင်းဆိုမှု စခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျောင်းတွေ ဆေးရုံတွေကိုတော့ Free ပေးပေမယ့် service တော်တော်များများ အသုံးပြုလို့မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် Master တက်နေတဲ့ကျောင်းသား Linus Torvalds ဟာ Unix ကိုအခြေခံပြီး Linux OS ကိုစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Linux မတိုင်ခင်မှာတော့ Minix ဆိုတဲ့ OS ကို သူ့ဆရာ Dr. Andrew S. Tanenbaum ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Minix ကတော့ education အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားထားတဲ့ Unix-like OS တစ်ခုပါ။ Linux Torvalds က Linux ကို Portable OS ဆိုပြီး Master Thesis အနေနဲ့တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး Free Opensource ပေးခဲ့ပါတယ်။ Dr. Andrew S. Tanenbaum ကတော့ Linus Torvalds နဲ့ အကြီးအကျယ် စကားများခဲ့ပါတယ်။ Dr. Andrew S. Tanenbaum က Linux ကို အားမပေးခဲ့ပါဘူး။ အောင်မြင်မယ်လို့လည်း မခံယူထားပါဘူး။ GNU License ဖြစ်တဲ့ Linux ကို လူတိုင်းက ပြုပြင်ရေးသားပြီး လိုအပ်သည်များကို Feedback ပြန်ပေးခဲ့တာကြောင့် Linus က နောက်ထပ် kernal version ကို ပြန်ထုတ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Linux က Richard Stallman ရဲ့ GNU project ကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆို ပိုမှန်ပါမယ်။ GNU project ကနေ Application အမြောက်အမြားကို Linux အတွက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Window GUI ပါဝင်လာပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Windows 98, Windows Xp အချိန်ထိတိုင်အောင် Linux command mode အဓိကထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် Windows လောက်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပဲ Advanced User တွေ ကျောင်းသားတွေအတွက်သာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အခုအခါမှာတော့ Windows ထက် များစွာ သာလွန်ကောင်းမွန်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ဘယ် user မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ရှိရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
Linux ကို Linux OS ဆိုတာထက် Linux လို့ပဲ ခေါ်သင့်တယ်။ OS ကတော့ Distro တွေက ထုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Ubuntu OS, Fedora OS လို့ပဲခေါ်သင့်ပါတယ်။ Linux က OS မဟုတ်ပါဘူး။ Kernel တစ်ခုပါ။ OS တစ်ခုဖြစ်အောင် Application တွေများစွာ ပါဝင်လာအောင် Developer တွေက လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။ Linux OS လို့မခေါ်ပဲ သူ့ကိုယ်ပိုင် Distro နာမည် OS လို့ပဲ ခေါ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Ubuntu OS ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘာ Distro တွေရှိတယ် ဘယ် Linux Distro က ထိပ်ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုတော့ http://distrowatch.com/ မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Linux ရဲ့ Logo အဖြစ် Tux ဆိုတဲ့ ပင်ကွင်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Tux ကတော့ Linus ရဲ့ ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတဲ့ နာမည်ဖြစ်ပြီး ပင်ကွင်းကတော့ ငယ်စဉ်က Tux ကို ပင်ကွင်းကိုက်ခံ မိဖူးတာကို မှတ်မှတ်ရရအနေဲ့ ပင်ကွင်းကောင်လေး အသုံးပြုထားတာပါ။
ကျွန်တော် ကြားဖူးနားဝများတာဖြစ်သောကြောင့် အချို့အချက်များသည် မှားယွင်းကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။
Linux ဆိုတာ Unix-like computer operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ Linux ဟာ free software များနဲ့ open source development များအတွက် အကောင်းဆုံး example ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် source code များကို လွတ်လပ်စွာ ပြုပြင်အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်ဖြန့်ဝေ ခွင့်ရှိပါသည်။
လင်းနစ်ကို ၁၉၉၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ရက်နေတွင် Linus Torvalds(Helsinki, Finland) ကစတင် public release လုပ်ခဲ့ပါသည်။ လင်းနစ်အကြောင်း မဆွေးနွေးခင် MINIX ဆိုတာကို အရင် ဆွေးနွေးဖော်ပြပါမည်။ MINIX ဆိုတာကတော့ Unix-like system တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျောင်းသုံးအတွက် ဖြစ်ကာ Andrew S. Tanenbaum ဆိုသူက ၁၉၈၇ခုနှစ်တွင် ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနောက် ၁၉၉၁ ခုနစ်တွင် University of Helsinki မှ Linus Torvalds ဆိုသူသည် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်ပဲ MINIX ကိုအစားထိုးရန်အတွက် ကျောင်းတတ်နေစဉ်ကာလမှာပင် linux kernel ကိုကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် ကမ္ဘာ၌ လင်းနစ်အသုံးပြုသူဦးရေပျဉ်းမျှ ၂၉ မီလီယန်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ထိုအရေအတွက်မှာ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူအရေအတွက်၏ 3-4%(၂၀၀၃ခုနှစ် ခန့်မှန်းချက်အရ) မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဆော့မှာ 90% ဖြစ်ပြီး ကျန်သော အခြာရာခိုင်နှုန်းများမှာ mac နှင့် အခြား OS များဖြစ်ပါသည်။
Linux ဖြင့် package အမျိုးမျိုးကို Linux distributions အမျိုးမျိုးမှ ထုတ်လုပ်ကြပြီး တချို့သော distributor များသည် kernel များကို ပြုပြင်ထားသောကြောင့် software package များသည် distributor တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တူညီမှုမရှိကြပေ။ အောက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားများသည် Linux distributions အမျိုးမျိုးမှ public release ထုတ်ခဲ့သော အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအမျိုးအစားများ၌ Ubuntu သည် လူကြိုက်များသော အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀ရက်နေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံအကြိမ် စတင်၍ public release လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် ၂၀၀၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃၁ရက်နေ့တွင် 8.10 ကို public release ထုတ်လုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Ubuntu ကို အာဖရိကန်ဘာသာစကားဖြင့် "တဦးနဲ့တဦး စာနာထောက်ထားခြင်း" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး အခြေခံ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ operating system တခုလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ laptop, Desktop များသာမက Server ကွန်ပျူတာများအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ Ubuntu သည် ဂရပ်ဖစ်တွေကို အသားပေးသော Gnome desktop environment ကိုသုံးပါပြီး စတင်သုံးစွဲသူများ(MS မှ စတင်ပြောင်းလဲ စမ်းသပ်အသုံးပြုသူများ) အတွက် အထူးသင့်လျှော်သော အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်ကာလတွင် ကွန်ပြူတာသုံးစွဲသူများသည် လင်းနစ်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို လက်ခံရင်း သုံးစွဲနေကြပါပြီ။ Linux သုံးခြင်းဖြင့် ကွန်ပြူတာကို လုံလုံခြုံခြုံ အသုံးပြု့ နိုင်သည့်အပြင် ၄င်း၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို ပြုပြင်နိုင်ခွင့်ရှိသဖြင့် ITpro များ အတွက် ကျေနပ်အားရနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းပါတယ်။ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။
ဒီ Thread လေးကိုကျ တော် အရမ်း သဘောကျ တဲ့ ....
ဘာလို လဲ ဆိုတော့ ဒီမှာ Principle of Linux လေး အကြောင်းပြော ပြီး ကျ တော့် Thread မှာ Application ကို ပြောချင်းအားဖြင့် ဖတ်ရသော မိတ် ဆွေ သဟများ နား လည် ရလွယ် ကူမည် လို ကျ တော် ထင် တယ် .....
Linux အကြောင်းကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတဲ့ အီးဘွတ်ကလေးပါ။ ကျွန်တော်ပြန်ထားတာ မဟုတ်သလို၊ ဘယ်သူလုပ်ထားတာမှန်းမသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုမှစလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် အတော့ကို သင့်တော်မယ်လို့ထင်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။RedHat9ကို နမူနာထားပြီး OS အင်စတောလေးရှင်းကိုလဲ ရှင်းပြထားပါတယ်။
ကြိုးစားပမ်းစား နဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လုပ်ထားပေးတဲ့ အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ဒီနေရာကနေပဲ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါရစေ။ ဒီအီးဘွတ်ကို လုပ်ထားတဲ့သူကိုသိကြရင်လဲ အကြောင်းကြားပေးကြပါ။
(တစ်ခုတော့ရှိတယ်... telnet ရဲ့ port ကို 33 လို့ရေးထားတာတွေ့ရင် 23 လို့ပြင်ဖတ်လိုက်ကြပါ။ typographic error တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ )
လင့်(ခ်)က ဟောဒီမှာ ....
လင်းနပ်(စ်)တော်ဗယ် ပထမဆုံးဖြန့်ေ၀ခဲ့တဲ့ Linux Kernel ရဲ့ source code ကိုတော့ ဒီမှာဒေါင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
C သမားတွေအတွက် အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအီးဘွတ်လေးကို စတင်ရေးသာသူက ဗိုလ်မှူးတိုးအောင် လို့တော့ ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။ ဒါကို ကိုကျော်လင်းငြိမ်းက ၀င်ပြီး ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ထားတာပါ။
ဒီအောက်က hyperlink လေးကို သွားပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအောက်က comments တွေကိုလဲ အချိန်ရရင်ဖတ်ပါ။
Window GUI ပါဝင်လာပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Windows 98, Windows Xp အချိန်ထိတိုင်အောင် Linux command mode အဓိကထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် Windows လောက်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပဲ Advanced User တွေ ကျောင်းသားတွေအတွက်သာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အခုအခါမှာတော့ Windows ထက် များစွာ သာလွန်ကောင်းမွန်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ဘယ် user မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ရှိရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
Ma အိအိ ပြောရမယ်ဆိုရင် Linux ကောင်းတယ်ဆိုတာမငြင်းပါ။ သို့သော် Windows ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလုံး၀မဟုတ်ပါ။ Linux ကို Networking စတင်လေ့လာတဲ့၁၉၉၈ လောက်ကစသုံးကြည့်ခဲ့တာပါ။ Linux ၂.၀ ဘဲရှိသေးတယ်။ Windows NT 3.5 ဘဲရှိသေးတယ်။
နောက်တော့ Redhat Linux 6.0 ကိုလည်းစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပေမယ့် သူများတွေကောင်တာပြောထားလို့မကောင်းတာဘဲပြောဘာမယ်။
၁။ Windows ထက် ပို Stability ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ် ၆၀% လောက်ဘဲမှန်ပါတယ်။ Install/Uninstall လုပ်ရင် Linux လဲသွားတာပါဘဲမယုံရင်စမ်းကြည့်ဘာ
၂။ Windows လောက် software မများဘူးလူတိုင်းသိပါတယ်
၃။ Windows ထက်ပိုကောင်းရင်အမျာစုကအလကားရတာဘဲဘာလို့မသုံးကြတာလဲ။ လူတွေမသိသေးလို့ လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အလကားမရတဲ့ Windows ကိုအတင်း Pirated software တွေတောင်သုံးနေသေးတာ အလကားရတဲ့ ဟာမသိဘဲနေပါ့သလား။ Windows လောက်
လူတွေကို Satisfactory လို့ပြောကြတဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာအပြည့်အ၀မရသေးလို့ပါ။ Windows ထက်တကယ်ပိုကောင်းလာတဲ့အချိန် Microsoft Windows အလကားရရင်တောင်သုံးကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ်သုံးနေတာ၊ကိုယ်အကြိုက်
တွေ ့တာလေးတွေအပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံးရယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့ဦးနော်။
အဲတကယ်ကောင်းတာကတော့ Macintosh or Apple ပါဘဲ၊လွယ်တာကတော့ သုံးဘူးရင်သိကြပါတယ်။ နောက်တော့ဆက်ပြောမယ်အခုတော့လက်အရမ်းညောင်းသွားပီ။
ဟုတ်ပါတယ် မမအိပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ် (စီးပွါးရေးမကောင်းတော့လို့ လူစုပြီး ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ကာ အော်လံနဲ့ မအော်နိုင်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ):D ဒါပေမဲ့ Linux သုံးနေကြတာ အလကားရတာ၊ ကောင်းတာထက်ဆိုင်ရင် Microsoft လွှမ်းမိုးမူကို မခံချင်တာရယ်နဲ့ ဝါဒရေးရာ အားပြိုင်မှုကြောင့်ပါပဲ။ အဓိက ကတော့ နိုင်ငံရေးအရ အမေရိကကို မယုံလို့ အမေရိကန်အခြေစိုက် Microsoft ကိုမသုံးတဲ့သဘောပါပဲ။ Linux အသုံးများတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်လဲ အများစုက အမေရိကရဲ့ ပြိုင်ဖက်၊ ရန်ဖက်တွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အီရတ်စစ်ပွဲတုန်းကလဲ အီရတ်တွေစစ်ရှုံးရတာ အမေရိကန်အခြေစိုက် Microsoft ကိုသုံးလို့ရှုံးရပါတယ်လို့ တီးတိုးခန့်မှန်းချက်တွေ ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ (အမှန်တော့ သူတို့အသုံးမကြလို့ရှုံးရတာကိုများ)။ အဲဒါကြောင့် Linux ကို Microsoft ထက်ပိုကောင်းပါတယ်လို့ပြောလာရင်တော့ ကျနော်တော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ကျနော် အချင်းချင်း မငြင်းချင်ပါ။
မအိအိလဲ Micro$oft က အရောင်းမြင့်တင်ရေးတစ်ယောက်မဟုတ်သလို၊
ကျနော်လဲ Linux ၀ါဒဖြန့်နေတဲ့သူ မဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးသမားလဲမဟုတ်ပါ။
Linux ကိုမကြိုက်ရင် မသုံးနဲ့။ မသိသေးတဲ့ သူတွေသိသွားရင် တော်လောက်ပါပြီ။
နောက်မှ နောင်တရကြတာမျိုး၊ အော် ငါက Windows ပဲ Operating System လို့ထင်တာ၊ ခု Linux ပါရှိသကိုး စသည့်ဖြင့်ပေါ့။
ဥပမာပေါ့ ဟိုအိမ်တွင်းနတ်တို့ ဘိုးတော် နတ်ကတော်တို့ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့သူတွေကို မင်းတို့သွားမယုံနဲ့ အယူအဆအမှားတွေ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်လာနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ် လို့သွားပြောရင် သူတို့လက်ခံမှာ မဟုတ်သလို ရန်တောင် လာရှာလိမ့်ဦးမယ်။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးရှိသင့်တယ်။ ကိုယ့်ဆန္ဒကို ကိုယ်ဖော်ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိသင့်ပါတယ်။ မအိအိတို့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါ။ မအိအိတို့ ကိုIstein တို့ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို ဖေါ်ပြပေးတဲ့အတွက်ပါ။
ဘာပဲပြောပြော Linux is the software of the freedom ပါ။
ဘာသုံးရမလဲဆိုတာကို ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး... အော်... Linux ဆိုတာ ဒီလိုလား ဆိုတာလေးကို ကျောင်းသားတွေ အခြားအခြားသော user တွေ သိသွားစေဖို့ပါ.... Unix-Like OS တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တွေ ရွေးသုံးလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းသားတွေ အချို့ computer သမားတွေက Linux ဆိုတာဘာလဲ။ opensource ကြီးလို့ပဲသိကြတယ်။ တချို့ကျောင်းသားတွေဆို opensource ဆိုတာဘာမှန်းမသိ။ GNU GPL ဆိုတာ ဝေး။ အဲလိုမျိုးလေးတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ဆွေးနွေးရှင်းပြပေးဖို့ပါ။ Linux ကောင်းကြောင်း Windows ကောင်းကြောင်းတွေ ပြောနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
Linux အပြင် React OS ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ သူကတော့ Windows Like ပေါ့။ opensource ပဲ။ ဒီ thread နဲ့မဆိုင်လို့ မပြောတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အော်... ဒါပါလားလို့ နည်းနည်းလေး သိသွားစေချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ဆိုလိုနေတာက ၀င်းဒိုးနဲ့ Mac ကို မကောင်းဘူးလို့ ပြောနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Mac တော့ ကျွန်တော်မသုံးဖူးလို့ သေချာမသိပါဘူး။ ၀င်းဒိုးကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ယ်သုံးရတဲ့ အမျိုးအစားလေ။ နောင်တစ်ချိန် လူတိုင်းမဖြစ်မနေ ၀ယ်သုံးရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလို အနေအထားမျိုးနဲ့ လူတိုင်းဘယ်လို့မှ သုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင် ၀င်းဒိုးတစ်ခုပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ application software တွေ မပါသေးဘူး။ အားလုံးသာ ၀ယ်သုံးရမယ်ဆိုရင် လူချမ်းသာတွေပဲ သုံးနိုင်တော့မဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လင်းနစ်မှာ ကြတော့ ဒါမျိုး မရှိဘူးလေ။ အားလုံးနီးပါက ဖရီးကြီးပဲ။ လင်းနစ်သုံးတဲ့လူတွေက ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တာကို ကိုယ်ရေးတယ်။ ပြီးတော့ သူများတွေကို မျှေ၀ပေးမယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ ဘာမှ မလိုဘူး။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်လေးပဲ လိုတယ်။ အဲဒီသဘောမျိုးတွေကို ပြောတာပါ။
နောက် နောင် အရှည်အတွက် ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်မြင်တာလေးပေါ့။ အမှားအယွင်းများ ရှိရင် ထောက်ပြပေးပါ။
မဟုတ်ရင် sorry နော် ကျနော်က မအိ post ကိုပဲဖတ်မိပြီး ဘန်းကျော်သားပီပီ ထောက်ခံလိုက်တာပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ မရည်ရွယ်ရပါ။ အထင်လွဲရင်တော့ I am very sorry :77::77::77: post ပါဖျက်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ကို Box 02 လဲ စိတ်မရှိပါနဲ့။ ကျနော်မှားသွားပါတယ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကိုIstein ကျနော်လဲ ဘယ်လိုမှ မထင်ပါဘူး။ ဖိုရမ်မှာတော့ အငြင်းအခုံလေးတွေရှိကြမှာပါ။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အထင်အမြင်အယူအဆတွေရှိတော့လေ၊ အဲဒီအယူအဆလေးတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တူကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုမတူတာကပဲ တနည်းတွေးရင် ကမ္ဘာကြီးကို လှနေစေတယ်။ ကိုIstein ကလဲ ဒီဟာလေးနဲ့ ဖိုရမ်ကို မ၀င်တော့ဘူးမလုပ်ပါနဲ့။ ဘယ်သူမှ ကိုIstein ကို မမုန်းကြပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့ဟာတွေ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လာပြီး ဆွေးနွေးပါ။
သို့သော်လည်းပဲ အခုအခါမှာတော့ Windows ထက် များစွာ သာလွန်ကောင်းမွန်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ဘယ် user မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ********************************************** I was read everyone's post and all are good in reason but I only just to highlight that above phrase. In my post I explained in this days Linux is not much better OS than Windows. That's my point bar. Hay Istein don't feel guilty you are not wrong and everyone can share their point of views. Therefore talk as you wish and do as talk.
mz က ကျနော့ကို ချဉ်နေကြတဲ့ လူအားလုံး (admin ကြီးတွေ အပါအဝင်) ဒီနေ့ကစ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေလိုက်ကြတော့နော်။ ကျနော် ဒီနေ့(26 nov 2008) ကစလို့ mz မှာ post တွေဘယ်တော့မှ ဝင်ရေးမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အားလုံးပဲ မျက်စိနောက်သလိုရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ မောင်နှမတွေလိုသဘောထားပြီး နောက်မိပြောင်မိတာတွေလဲ ထိခိုက်သလိုဖြစ်ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။
အိုင်းစတိုင်းလေးကလည်း စိတ်ကောက်နေပြန်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့က အပြစ်ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကျွန်တော်တို့ သိသလောက်လေးတွေ ၀င်ဆွေးနွေးတာပါ။ အိုင်းစတိုင်းလေး အဲဒီလို နေမယ်ဆိုရင် mz က ကောင်မလေးတွေက အရမ်းချောတဲ့ အိုင်းစတိုင်းလေးကို လွမ်းပြီး ကျန်ခဲ့နေမှာပေါ့။ သူတို့လေးတွေကို မသနားတော့ဘူးလား။
မအိရေ.... ကျွန်တော် ပြောတာ နည်းနည်းလိုသွားတာပါ။ Windows သမားတွေအနေနဲ့ကတော့ အခုထက်ထိ Linux ကို စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး... မှန်ပါတယ်... Windows က ပိုပြီး friendly ဖြစ်နေဆဲပါ...
သို့သော်လည်းပဲ အခုအခါမှာတော့ Windows ထက် များစွာ သာလွန်ကောင်းမွန်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ဘယ် user မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆိုတာက ကျွန်တော် အကျယ်မရေးမိတာပါ။ အဓိကတော့ virus ပြသနာကင်းရှင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့မှာ effect လှလှလေးတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထည့်သွင်းလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး memory လည်း သိပ်မစားဘူး။ ကျွန်တော်က Ubuntu ကောင်းတယ်လို့သာ အော်နေပေမယ့် Vista ကြီးကိုတော့ မသွင်းပဲ မနေရဲဘူးလေ။ အလုပ်တော်တော်များများက Windows နဲ့လုပ်နေရတာပါ။
Ubuntu ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေက Live CD version လေးတွေရလာတပါ။ အဲဒီအတွက် Windows format ချရမယ် နောက်ပြီး data တွေလည်း backup လုပ်ရအုံးမယ်။ အဲလိုအခါလေးတွေမှာ Live CD လေးသုံးပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ backup လုပ်လို့ရတယ်လေ။
Linux ရဲ့ GUI ဖြစ်တဲ့ Gnome ပဲဖြစ်ဖြစ် KDE ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အတွက် အစပိုင်းမှာ သုံးရတာခက်ပါတယ်။ တချို့တွေဆို network တောင် မချိတ်တတ်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Linux သမားတွေအတွက်ကတော့ Linux ဟာ Windows ထက်သာတယ်လို့ပဲ ထင်မိနေတာ Linux သမားတွေရဲ့ အတ္တဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ကျွန်တော့်အရေးအသား မကောင်းမွန်မှုကြောင့် အခုလို ဖြစ်ရတာ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် pm ပို့ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ မထွက်စေချင်ပါဘူး။
အိုင်းစတိုင်း ...နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ... ကလေးမဟုတ်သူငယ်မဟုတ်နဲ့...
လင်းနစ် နဲ့ ၀င်းဒိုး ဘယ်သူကပိုကောင်းလဲဆိုတာ OS ပေါ်မှာထက် USER ပေါ်မှာပိုတည်မှီတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ မြန်မာစကား ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ....။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးနေကြလို့ အင်္ဂလိပ်စာကို မသိမဖြစ်လေ့လာသင့်တယ်လို့ပြောရပေမယ့်....တစ်ကယ်တမ်း တိတိကျကျ စာချုပ်စာတမ်းတွေလုပ်တဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လိုရေးကြတာထက်... ပြင်သစ်လိုရေးကြတယ်။ ဒါ... သူတို့က မြန်မာစာ မတတ်ကြလို့ပါ။ စကားကပ်ပြောတဲ့နေရာမှာ မြန်မာစကားလောက် ဘယ်ဟာမှ မကောင်းဘူး...။ ဟီး ဟီး...။
ဒါပါပဲ....။ ဒါပါပဲ...။ OS ကို customization လုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာတော့ windows ဟာ Linux ရဲ့ မြေးအဆင့်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ Windows ကို Live CD လုပ်တဲ့အခါမှာ memory အရမ်းသုံးပြီး linux လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမဖြစ်တာဟာလဲ windows ကိုအသေကိုင်ထားတဲ့ service သမားတွေအတွက် လိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။
ကဲ... ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်သေးပြီဗျာ....။ ငြင်းနေကြမှာထက် လက်တွေ့လုပ်ပြကြဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဘာမှဆက်ပြောမနေနဲ့ အိုင်းစတိုင်း... ပြန်လာ....
အိုင်းကြီးက လာမဲ့ ပုံတော့ မပေါ်ဘူးကျ mz အတွက်တော့ လွမ်းစရာဘဲပေါ့ :d
အိုင်းကြီးက လာမဲ့ ပုံတော့ မပေါ်ဘူးကျ mz အတွက်တော့ လွမ်းစရာဘဲပေါ့
အေးဗျာ .... ကိုအိုင်းစတိုင်းရဲ့ ပိုစ်တွေ သရက်ဒ် တွေက ပညာလည်းရသလို ရယ်လဲရယ်ရပါတယ် သူကဟာသညာဏ်ရှိတယ်ဗျ ... အိုင်ကျူပြေးတယ်ပေါ့ဗျာ .... Mz မှာဒီလို မန်ဘာတစ်ယောက်လျော့သွားတာ နှမြောစရာပါပဲ ... ဘာကိုစိတ်ခုသွားလဲမသိပါဘူးဗျာ ...
ကျွန်တော်တို့မှာ mz ရဲ့့့ ဒွေး ကိုဆုံးရှူံးသွားတာပေါ့ ....(နှိူင်းတာ မှားသွားလားဟင်)
ဪဒွေးနဲ့မှနှိုင်းရက်ပလေ့ ဒွေးကသေသွားရှာပြီ ကိုကိုအိုင်းက အရှင်လတ်လတ်ကြီးရယ် ဒီကလေးမကြာခင်ပြန်လာမှာပါ။ ကောင်မလေးလှလှလေးသာ mz ထဲခေါ်လိုက်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ် :d ဟီးဟီး
ဪဒွေးနဲ့မှနှိုင်းရက်ပလေ့ ဒွေးကသေသွားရှာပြီ ကိုကိုအိုင်းက အရှင်လတ်လတ်ကြီးရယ် ဒီကလေး( စိတ်ကောက်နေ၍ ကလေးဟုနှိုင်းသည် )မကြာခင်ပြန်လာမှာပါ။ ကောင်မလေးလှလှလေးသာ mz ထဲခေါ်လိုက်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ် :d ဟီးဟီး
ဒီပို့စ် က အတော်လေးကို အသက်၀င်နေပြီလားတောင်မသိပါဘူး။ကျွန်တော်အစကတော့ Linux တို့၊ fedora တို့၊ red hat တို့ဆိုတာ နာမည်လောက်ပဲကြားဖူးတာ။ အရင်တစ်ပတ်ကမှ ကျွန်တော့်အစ်ကိုက fedora9 နဲ့ virtual box (VMware) ကို ပေးလိုက်တော့ install တော့လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ မသိတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ပစ်ထားရတယ်။Red Hat သုံးပုံနဲ့က အတူတူပဲလား။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ internet တော့ မချိတ်ထားဘူး။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးကြပါအုံး...။ကျွန်တော်တို့လို မသိသူ၊သိချင်နေတဲ့သူ၊နည်းနည်းလေးပဲသိထားတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့...။:6:
ခင်ဗျားရေးပေးလို့ ..... အများကြီး သိသွားတဲ့သူတွေကို ပြန်ကြည့်ဦးလေဗျာ .....
ပြန်လာပါဗျာ...... Mz က အညင်းအခုံနည်းပါတယ် .......
ြပြီးတော့ တစ်ယောက်လျှော့သွားရင်လဲ့ မကောင်းဘူးလေ ....
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကွာ.... ပေျာ်ပျော်ပေါ့... ဟုတ်ဘူးလား
Linux ပေါ်လာတာကြောင့် MS အထိ နာမယ်ထင်ပါသလား။ ကျွန်တော်ကတော့ မထင်ဘူးဗျ။ အဓိက အထိနာတာကတော့ MS ရဲ့ ပြိုင်ဖက်တွေပဲ။ Linux ကိုနောက်ပိုင်း web server hosting တွေမှာ သုံးကြတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေ အထိနာကုန်လဲဆိုတော့ Server OS ရောင်စားတဲ့လူတွေပေါ့။ SUN ကတော့ တော်တော်လေး ထိသွားမယ်ထင်တယ်။ Windows အနေနဲ့ကတော့ ASP.NET ကို run ချင်ရင်တော့ Windows မဖြစ်မနေသုံးရတယ်ဆိုတော့ နောက်ပြီး .NET developer တွေကလည်း အများကြီး company တော်တော်များများကလည်း ရုံးတွင်းမှာ MS server တွေသုံးသလို Linux server တွေလည်း သုံးကြတယ်။ .NET run မယ်ဆိုရင်တော့ windows server ကတော့ မရှိမဖြစ်ပေါ့။ Linux အတွက်ကတော့ PHP , python တွေအတွက် server ထိုုင်ကြတယ်။ apache , php , mysql စတာတွေကို ပေါင်းပြီး ထိုင်ကြတယ်လေ။ Windows မှာကတော့ PHP လည်းရတယ်။ mysql လည်းရတယ်။ IIS နဲ့ ထိုင်လို့ရတယ်လေ။ တနည်းပြောရင် Windows နဲ့ Web Server မှာထိုင်မယ်ဆိုရင် ASP,ASP.NET,PHP,Python စတာတွေ run လို့ရပြီးသားလေ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ စျေးများပေမယ့် သူ့ market က အခုချိန်ထိအောင်မြင်ပြီးသားပါ။ Linux ကြောင့် Unix ပဲ အထိနာတာပါ။ MS ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေပဲ အထိနာတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်လေးကို ဆွေးနွေးတာပါ။
အပေါ်မှာ ကျနော် မှားတယ်ပြောခဲ့တာက ဒီ Thread မှာ ဝင် ရေးမိတာကိုပြောတာပါ။ Linux ထက် Windowက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ကျနော့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့ကို ခင်မင်စာနာပေးတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တခုက အလကားရတယ်ဆိုတဲ့ ငါးစာပဲ မြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်ကြမှာစိုးလို့ပါ။ ကျနော် ဒီ ကတကယ်ထွက်သွားချင်ရင် ဒီလိုစာတွေတောင် မရေးခဲ့ပါဘူး။ ကိုညလေးတယောက်ပဲ ကျနော်လုပ်သွားတာကို နားလည်တယ်နော်။:71: ဒီလိုဆိုတော့လဲ ကိုညလေးနဲ့ ကျနော် အမျိုးတော်လို့ ရပြီပေါ့နော်။:P (ကို Alexender ကိုတော့အားနာပါတယ် သူအသည်းကွဲကျန်ခဲ့တော့မှာကို):D။ ကျနော့ကိုချဉ်နေကြသူများ အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော် ဆက်ရေးနေမှာမို့လို့ပါ။
Istein ကို အားပေးတဲ့ ဘော်ဘော်များကို အထူးပဲကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။:8:
ဒို. တိုတို အိုင်း ကြီး ပြန်လာပြီ ။ ကြိုဆို တဲ့အနေနဲ. :6:party လေးဘာလေးလုပ်ရ မှာ ။ party မရရင်လည် ခွက်ပုန်း လေး:D။ တိုတို အိုင်းပြန် လာတာ အရမ်း၀မ်သာ ပါတယ် ။
နောက်တခုက အလကားရတယ်ဆိုတဲ့ ငါးစာပဲ မြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်ကြမှာစိုးလို့ပါ။
အလလားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို သေချာသဘောက်ပေါက်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘိန်းမုန့်အလားကားစားရတာမျိုး၊ လ္ဘက်ရည်အလကားသောက်ရတာမျိုး၊ ပုဆိုးအလကားရတာမျိုး၊ လက်ဆောင်အလကားရတာမျိုး၊ လဘ်လာဘအလကားရတာမျိုးလောက်ပဲတန်တဲ့ အတွေးမျိုး မတွေးသင့်ပါ။
Free Software ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သေချာနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာ GNU organization ကနေ Free Software ရဲ့ Definition ကို အတိအလင်းရေးသားထားပါတယ်။ ကျနော် ဒီမှာ အကျဉ်းလေး ကူးတင်ပေးမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်ပါ စဉ်းစားပါ။ လေ့လာပါ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်ပါ။
Philosophy of GNU Project
We love The Freedom of The Software!!!
အနော်ဆရာ၀င် လုပ်တာဟုတ်ဘူးနော် ။အတို တို့တွေ linux နဲ့ window ပိုကောင်းတယ် ပိုမကောင်းဘူး ရှုင် ပြိုင်မှု လေးရပ် ကြရအောင် နော် :77:
tea နဲ့ coffee လိုပါ ပဲ။နှစ်ခုလုံး ကောင်းပါ တယ် ။အကြိုက်ပေါ် မှာမူတည် ပါ တယ် ။ window ဆို တာလဲ နာမည် တလုံး နဲ့ နေ တာ ပဲ။ ကောင်း လိုပဲ လူတွေ သုံးနေ ကြ တာ လေ။ linux ကို လည်း professional computer သမားကတွေလက် ခံ ကြတာပဲ။ဒါကြောင် window ဆရာတွေကော linux ဆရာတွေကော ကိုယ်ထူး ချွန်တဲ့အပိုင်း ကနေ ပညာတွေ ဖျန့်ေ၀ပေးကြပါ:77:
ကျနော်ရဲ့ Free Software အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပို့စ်မှာ M$ Windows ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးမှ မပါပါ။ နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောတာလဲမပါသေးပါဘူး။ Free Software Definition ပဲရေးရသေးတယ်။ မသိနားမလည်သေးတဲ့ သူများအတွက်ပါ။
guengey က ဘာကြောင့် ရပ်စေချင်ရတာလဲ။ ဘာကိုကြောက်နေတာလဲ။ ဘယ်သူမှ M$ Windows လို Software ကို မသုံးကြတော့မှာကြောက်တာလား။ မပူပါနဲ့ဗျား .. သူ့ customers တွေရှိပါတယ်။ )
ကိုguengey ပြောသလိုပါပဲ။ကျနော်ကတော့ mz မှာတော့ မငြင်းခုံစေချင်ပါဘူး။ တခြားငြင်းခုံလို့ရတဲ့ ဖိုရမ်တွေရှိပါတယ်။ mz ကတော့ မိသားစုသဘောမျိုးဆောင်ပါတယ်။ တယောက်ကိုတယောက် ကူညီမယ်။ မသိတာတွေပြောပြမယ်။ မတတ်သေးတာတွေ သင်ယူမယ်။ နွေးနွေးထွေးထွေးပေါ့ဗျာ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ :):):67::67::67:
ကိုguengeyက စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။:):):)
ဘယ်သူမှ M$ Windows လို Software ကို မသုံးကြတော့မှာကြောက်တာလား။ မပူပါနဲ့ဗျား .. သူ့ customers တွေရှိပါတယ်။ )
MS ကိုမသုံးမှာတော့ မ ပူ ပါဘူး ၊ပညာဖျန.်တာကကောင်းပါတယ် ၊ ဘန်ကျော် မှာက free or not ,all the same . +/- 1000kyat ပါ။ software တော်တော် ကောင်း တွေရပါ တယ် ။ ကို box02 ပြောသလို ပဲ freeware တွေကကောင် ပါ တယ် ။အနော် တိ့ုလဲ freeware ကြိုက် ပါတယ် ။ အလကားရတာကို ။ တချိုတွေဆိုတော်တော်ကောင်းပါတယ် ။ free ဆို တဲ့အတိုင်း limit တော့လုပ် တာ ပေါ့။ rapidshare ပဲ ကြည်လေ။ freeaccount ဆို ရင် ။
ကျနော်က ကြားကနေ ဝင်ပြောပေးတာပါ။ ပြသနာကို အကျယ်အကျယ် မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ ကျနော် အစ်ကို့ကိုလည်း မချင်ပါဘူးဗျာ။ ဘယ်သူ့မှ မချင်ပါဘူး။ အားလုံးကို ခင်ပါတယ်။:):):):67::67::67:
ချဉ်ပါ ဘူးဗျာ။ အကို ကလည်း အကိ့ု knowlegde ကို share တာပဲ ။ အနော် သဘောကျပါတယ် ။ အားလုံး ညီအကိုတွေပါပဲ ။ကို box02 share ပေးတဲ့အတွက် thanks ပါ။ ကို Skyblue ကို လဲအနော့် ကိုနားလည်ပေးလို thanks ပါ။:)
ကျေးဇူးပါ guengey ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့တွေ ညီအစ်ကိုတွေပါ။ :67:
A good discussion and thank you for sharing.
အကုန်လုံးက ညီအစ်ကိုတွေပဲဗျာ.. အခုထက်ထိတော့ ရန်မဖြစ်သေးဘူး
ကျွန်တော် ဒီ thread စဖွင့်လိုက်တာကတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာမေးတယ်။ Linux ဆိုတာဘာလဲတဲ့။ ကျွန်တော် ရှင်းလိုက်လည်း သူတစ်ယောက်ပဲသိလိုက်မှာ။ နောက်ပြီး သူ မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဒီ thread လေးဖွင့်ထားတာပါ။ Windows ကောင်းလား Linux ကောင်းလား ပြိုင်ငြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ Linux ဆိုတာလေးကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်လို့ပါ။ UCSY ( University Of Computer Studies Yangaon ) ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေထဲမှာ 10% လောက်ကတောင် Linux ဆိုတာကို သိကြတာပါ။ တစ်ကျောင်းလုံး အတိုင်းအတာအရ ကျွန်တော် မှန်းပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအားလုံး ၁၁ ယောက်မှာ ကျွန်တော် အပါအဝင် ၂ ယောက် ပဲသိတယ်။ အဲ... တစ်ခန်းလုံးမှာဆို ပိုနည်းသွားနိုင်တယ် :P ။ ဒါကြောင့် UCSY ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလည်း မသုံးရင်တောင် သိစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ဒီ thread ကို စခဲ့တာပါ။
အကုန်လုံးက ညီအစ်ကိုတွေပဲဗျာ.. အခုထက်ထိတော့ ရန်မဖြစ်သေးဘူး :d
ကျွန်တော် ဒီ thread စဖွင့်လိုက်တာကတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာမေးတယ်။ linux ဆိုတာဘာလဲတဲ့။ ကျွန်တော် ရှင်းလိုက်လည်း သူတစ်ယောက်ပဲသိလိုက်မှာ။ နောက်ပြီး သူ မှတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဒီ thread လေးဖွင့်ထားတာပါ။ windows ကောင်းလား linux ကောင်းလား ပြိုင်ငြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ linux ဆိုတာလေးကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်လို့ပါ။ ucsy ( university of computer studies yangaon ) ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေထဲမှာ 10% လောက်ကတောင် linux ဆိုတာကို သိကြတာပါ။ တစ်ကျောင်းလုံး အတိုင်းအတာအရ ကျွန်တော် မှန်းပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအားလုံး ၁၁ ယောက်မှာ ကျွန်တော် အပါအဝင် ၂ ယောက် ပဲသိတယ်။ အဲ... တစ်ခန်းလုံးမှာဆို ပိုနည်းသွားနိုင်တယ် ။ ဒါကြောင့် ucsy ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလည်း မသုံးရင်တောင် သိစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ဒီ thread ကို စခဲ့တာပါ။
let's start the discussion of liniux now.